Bahrain: Omar Al Bashir sy ny fitsarana mitanila · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Omar Al Bashir sy ny fitsarana mitanila
Voadika ny 28 Avrily 2019 4:53 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2008)
Maneho hevitra amin'ny vaovao momba ny didy fisamborana ny filoha Sodaney Omar Al Bashir, navoakan'ny Fitsarana Heloka bavava Iraisam-pirenena (ICC amin'ny teny Anglisy), mamaritra ny fanapahan-kevitra ho toy ny ‘fitsarana mitanila’ ilay bilaogera Bahrainita Hayat. Hanavotra an'i Darfur sy ny vahoakany ve ilay fanapahan-kevitra sa tetikady hafa hamela an'i Etazonia hifehy ny faritra sy ny harenany?
Manoratra mikasika ny zava-nitranga i Hayat ary nilaza hoe:
اتهم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب باعتقاله .. و طلب الإعتقال و المحاكمة غير الزامي فهو بمثابة اتهام و اقتراح لن يدخل حيز التنفيذ .. لأنه يحتاج إلى ادانه دولية و تأييد دولي .. فلكي تتشكل قوة عسكرية دولية لتتدخل عسكريا في السودان و تعتقل البشير و تحيله للمحاكمة يتطلب ذلك موافقة من مجلس الأمن الدولي .. و هذه الموافقة لن تتحقق في ظل عدم توافق الصين و اوربا و روسيا مع امريكا و تضارب المصالح بينهم و اختلافهم في الكثير من القضايا و الملفات .. ..و ايضا سبب آخر و هو بإن هذه المحكمة لا تعترف بها الكثير من الدول .. بالإضافه إلى ان امريكا مقبله على رئاسة جديدة .. و في نهاية عهد بوش لن تتمكن من اعادة سيناريو العراق في السودان:
Niampanga ny filoha Sodaney Omar Al Bashir ho nanao heloka bevava an'ady, heloka bevava amin'ny olombelona sy ny famonoana olona tany Darfur ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ary nangataka ny fisamborana azy. Tsy voatery mihatra avy hatrany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana fa fangatahana fotsiny izay tsy hampiharina velively satria mila fanamelohana sy fanohanana iraisampirenena Tokony handany fanapahan-kevitra ho an'ny fananganana tafika iraisam-pirenena sy firotsahan'ny miaramila an-tsehatra ao Sodàna mba hisambotra an'i Al Bashir sy hitondra azy any amin'ny tribonaly ny Filan-kevitry ny Fiarovana ao amin'ny Firenena Mikambana, saingy tsy hitranga izany raha tsy mifanaraka i Shina, Eoropa, Rosia ary Etazonia, sy ireo tombontsoany mifanosona. Tsy mitovy hevitra amin'ny olana marobe ihany koa izy ireo. Ny antony iray hafa dia maro amin'ireo firenena no tsy mankasitraka io fitsarana io. Ankoatra izany, miditra amin'ny fifidianana vaovao i Etazonia, ary amin'ny faran'ny vanim-potoana Bush, tsy ho afaka hamerina ny toe-javatra Irakiana any Sodàna izy ireo.
Nahoana i Darfour no faritany tahaka izany? Araka ny filazan'i Hayat:
Manankarena akora voalohany toy ny solika i Darfur, ary heverina fa ny tahirin-tsolika irery ihany dia efa mihoatra ny fito miliara barika. Manankarena oranioma sy biby ihany koa izy ary nitarika fifandirana teo amin'ireo foko noho ny harena voajanahary tsy nananany. Nirongatra ity ady ity mba hampidirana governemanta avy amin'ny firenena maromaro, anisan'izany i Sodana sy Chad, izay samy manohana foko tsirairay, mba hahafahany manararaotra ireo loharanon-karena sy hifehy ny faritra sy i Darfur. Ny fanontaniana eto dia hoe: Ahoana no ahafahan'i Etazonia miditra amin'ity fifandonana ity sy hiaro ny tombontsoany eto amin'ity faritra ity ary handresy an'i Frantsa, izay mifaninana aminy noho ity harena ity.
Manontany i Hayat raha hiampanga ny lehiben'ny mpanakorontana no tena antony nanosika ny ICC, nahoana no tsy tsaraina ireo mpitarika avy any amin'ny firenena hafa. Hoy izy:
Afaka nampitombo ny hamafisan'ity fifandonana ity tao Darfur i Etazonia tamin'ny fanohanany ireo mpikomy manohitra ny governemanta .. ary ny fanapahan-kevitry ny ICC hanome rakotra maha-olona sy fialantsiny ho an'i Etazonia mba hitsabaka mivantana ny raharaha anatiny ao amin'io faritra io. Heverina ho fihatsarambelatsihy sy mitanila avy amin'ny ICC izany fanapaha-kevitra izany, ary noho ny tombontsoa ara-politika sy ara-toekarena fa tsy noho ny fitsipika sy ny soatoavina maha-olona. Raha tsy izany, aiza io fitsarana mitanila io amin'ireo heloka bevava nataon'ireo mpitarika ao Amerika, Israely, Ejipta, Bahrain ary ny hafa? Aiza izy ireo amin'ny zava-mitranga ao Iraka sy Palestina? Manohana ity fanapahan-kevitra ity aho saingy manohitra ny fitsarana mitanila, izay atosiky ny tombontsoa ara-politika sy ara-toekarena
Nanamarika bebe kokoa izy hoe:
Mino aho fa mametraka ohatra mampidi-doza ny fanapaha-kevitry ny ICC, ary koa pejy vaovao amin'ireo andiana fandrahonana sazy. Hanampy ny Amerikana sy ny hafa hifehy ny faritra, hiaro ny tombontsoany any, ary hanatanteraka ny fandaharam-potoany ara-stratejika sy ny tanjony izy ireo. Hahita an'i Omar Al Bashir ho any am-ponja ve izao tontolo izao tahaka ny nahitan'izy ireo an'i Charles Taylor, Liberiana sy Milosevic Serba ? Sa handefitra manoloana ny teritery ary hilalao ny lalaon'ny marimaritra iraisana sy ny fifanarahana mba hamonjena ny tenany? Sa ve hifanandrina amin'i Amerika amin'ny fifanarahana Abuja sy ny fahefana ankafizin'ny trano Sodaney? Sa misy Saddam vaovao sy Bashir hafa? Avelanay amin'ny andro vitsy manaraka ireo valinteny.
Ato amin'ny Global Voices ihany koa:
Sodàna: Iza no manaraka aorian'i Al Bashir ao anatin'ny lisitra voalohan'i Etazonia?